Ihe kpatara ndị ọrụ ji ejikọ Email gị | Martech Zone
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na-adaba na ụda ebe ha na-eziga email dabere na usoro ụlọ ọrụ ha ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ha karịa mkpa ndị debanyere aha. Inye ndị na-ege gị ntị ozi ịntanetị na ịhọpụta na ha bara uru ga-eme ka ha debanye aha ha, na-eme ha, na-atụgharị… ma na-emecha mee ka ị pụọ na folda email ha.
Mgbe ị gara na ebe nrụọrụ weebụ gị, na-azụ ihe, ma ọ bụ na-asụ ngọngọ gafee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị, onye ahịa abanyelarị ịnweta email n'aka gị. Maka onye na-ere ahịa, nke a bụ mmekọrịta na-emebi emebi, mmekọrịta siri ike ịchekwa, otu ụzọ na-ezighi ezi nwere ike ịkwụsị na ọdachi site na akwụkwọ ozi kọmputa gị na folda spam.
a Akwụkwọ akụkọ ihe omuma na-enye nlezianya anya banyere omume nzacha ntinye aka maka Gmail na Hotmail, ihe kpatara ndị debanyere aha ji ewepu ozi na email, yana ndụmọdụ maka ịbawanye njikọ.
Tags: emailemail iyoemail Marketingnjikọ akajunk iyospamspam nzachawepu aha
Mee 17, 2012 na 10: 20 AM
Ọ dị mkpa ịkekọrịta listi email gị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ọ bụghị mmadụ niile na-edebanye aha nwere otu mkpa. Ọ bụrụ na ozi ahụ adịghị mkpa oge ọ bụla ị nwere ike tufuo ha.